တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: မနေ့က ဖတ်မိသောဆောင်းပါးတပုဒ်
comment upon comment , then I add another comment.:)
Thanks to both of you, I mean, the one who made mistakes and the one who made the correction on it.
I have ever heard some words "Learn form others"
In fact we learned something form your blog, that is priceless.
This isafirst time i read your blog.I got fun and knowledge.I wish,you could make writer(like hla min mo mo or lwan htar htar).
Hi Ma Maydar,
What's the difference between "Sat Hta" and "Sat Hta Ma"? I have seen the "Sat Hta" usage as "Sat Hta Than Gar Yanar" (6th World's Buddhist conference) by U Nu. It was used as "Sat Hta". What we are familiar with is normally "Sat Hta Ma".
Is "Sat Hta" 6th and "Sat Hta Ma" only 6? (Sat Hta=6th; Sat Hta Ma= 6). So basically "Sat Hta" means "Sat Hta Ma A Kyain Myout".. is it?
Thanks! Ma May Dar.. :)
I want to ask the same question as Ko Cho. I want to know the difference between those2words.Can you explain it to us pls when u have time? Thanks to ur question Ko Cho.
10/30/2006 10:05 PM
ရေးတဲ့လူက ရေးဖြစ်တဲ့အတွက် ဖတ်တဲ့လူကလဲ ဖတ်ဖြစ်သွားပါတယ်။…. ;P
10/31/2006 12:41 AM
ကိုချိုနဲ့ ကိုသီဟရှင့် ..
တကယ်တော့ ဆဋ္ဌမ ဆိုတာ ပါဠိမှာ မရှိပါဘူး။ ၆ ဆိုရင် ဆ ပါ။ ၆ ကြိမ်မြောက်ဆိုရင် ဆဋ္ဌ ပါ။
ပဉ္စမ၊ သတ္တမ နဲ့ ရောပြီး ဆဋ္ဌကိုလည်း ဆဋ္ဌမ လို့ ဆိုကြလို့ ‘မ’ ပါသွားတာပါ။
ဆဋ္ဌမ မရှိတဲ့အတွက် ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာ လုိ့ပဲ သုံးတာပါ။
ဆဋ္ဌမသင်္ဂါယနာ လို့ မသုံးဘူးမဟုတ်လား။
ဆဋ္ဌမအာရုံ ဆိုတာလဲ မှားပါတယ်။ ဆဋ္ဌအာရုံလို့သာ သုံးသင့်ပါတယ်။
အမှားကြာတော့ အမှန်လိုလို ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ကိုယ်က မှန်နေရက်နဲ့ မှားတယ်လို့ ထင်ပြီး ပြင်ကြတာပေါ့။
မမေဓါ။ ဒီလိုဆို ငယ်ငယ်က ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေမှာ ဆဋ္ဌမတန်း မြန်မာဖတ်စာအုပ်၊ ဆဋ္ဌမတန်း သမိုင်း စာအုပ် စတာတွေမှာ၊ တရားဝင်ကြီးကို မှားနေတာပေါ့နော်။ အင်း၊ မမေဓါပြောမှ ကျွန်တော် သိတယ်။ ကျေးဇူး ခင်ဗျာ။
Thank you so much for your explanation, Ma May Dar Wii
11/01/2006 3:51 AM
I've noticed that (I believe) in all schools in Myanmar, they are using "Sat Hta Ma tan" as sixth standard. But your explanation seems to be reasonable. But the question is why are they(schools) using "Sat Hta Ma" foralong long time(as far as I can remember, our whole 11 years of schooling)?
Thanks for pointing out Ko Cho and Thiaha Kyaw Zaw.
And Thanks for sharing Ma May Dar Wii.
11/01/2006 4:08 AM
ဆဋ္ဌမတန်းလို့ပဲ သုံးနေကြတာကတော့ ကျမအထင် ဆဋ္ဌဆိုတဲ့ ပါဠိစကားကို မြန်မာက ဆဋ္ဌမ ဆိုပြီး မွေးစားစကားလုံးအဖြစ် ယူသုံးလိုက်တာဖြစ်ပုံရပါတယ်။ အဲဒီလိုမွေးစားလိုက်တော့လဲ မှားတယ်လို့ မဆိုသာတော့ဘူးပေါ့။ အမှန်တကယ် ပါဠိဘာသာကို နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများကတော့ ဆဋ္ဌမ လို့ မသုံးကြပါဘူး။